Ukutsala ooMvelisi kunye nabathengisi | Yongeza
Ikhaya > Iimveliso > Ukutyibilika kololiwe
Uloliwe wesilayidi okufanelekileyo onokufaneleka ukuba uvuleke okanye ukuvala kweDrawer.addith Udidi lweSilayidi seSilayidi, isilayidi esinebhokisi emibini, fgv Isilayidi sokutsala, isilayidi seSilayidi esifihliweyo njl.y.) Ubutyebi beyantlukwano yemveliso ekutyibilikeni koololiwe, ngokuqinisekileyo sinokufumana into oyifunayo.
Izilayidi zethu zeDrawer zenziwa ngentsimbi eqengqelekayo yentsimbi eqengqelekayo okanye intsimbi engenasitayile, i-erfmeisite ye-craft, i-right-suble-wistral engacingeli inyameko ekutsaleni kwaye ayinamsebenzi.
Ukufaka isicelo sezinto ezihle kakhulu zesilayidi sedrawer, i-crafrite craff ukwenza i-track ikhuphele kwaye i-Inner Raills inamandla. Ngokuhlolwa okusemgangathweni ngokungqongqo, kunokutsalwa ngokulula ngaphezulu kwama-50 000, kwaye kunokuxhasa izinto ezingaphantsi kwe-25 kg kunye nenxalenye ye-Scawer Slide Slides engaphezulu kwe-25KG.Uyiyikisa i-Buff kwaye uyilo Idrowa, iya kuchaphazeleka yi-buffer ivala kancinci idraweli ngexesha lokutyhala idraweli. Singanikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhetha imibala, kwaye ubukhulu beento ezahlukeneyo zinokubonelelwa ukuba zifezekise iimfuno zabathengi kumanqanaba ahlukeneyo. Isicelo sendawo-sithuba esihlukeneyo, silungele ukusetyenziswa kweedreyiswa ezinzima kakhulu ezinje ngeewadi, iincwadana, iitafile zebhedi, iidesika zekhompyuter, njl.